रासस ‘राष्ट्रको टिकट’ होः प्रा पी खरेल - Pokhara News
होमपेज-समाचार-रासस ‘राष्ट्रको टिकट’ होः प्रा पी खरेल
रासस ‘राष्ट्रको टिकट’ होः प्रा पी खरेल
प्रा पी खरेल । नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भावी दिनमा पनि अन्यत्रभन्दा महत्व बढ्छ । पहिलो कुरा, समाचार समिति राष्ट्रको ‘प्रेष्टिज भ्यालु’ हो । राष्ट्रको समाचार समिति हुन्छ भनेर दक्षिण एशियाका मुलुक हेरे हुन्छ, अन्य राष्ट्रलाई पनि पनि हेरे हुन्छ । दोस्रो, खासमा यहाँ एउटा मात्र समाचार समिति छ । यो हुँदाहुँदै पनि यसको पहुँच कम देखियो, उपस्थिति कम भयो । राससले तयार गरेका समाचारको भोलुम(परिमाण) र भ्यालु(महत्व) का रुपमा हेर्नुपर्छ । राससले आम नेपालीका लागि उत्पादन गरेको परिमाण र महत्व कति छ भन्ने नै हो । तेस्रो, राससले गरेको सेवाको न्यूनतम पहिचान पाएको देखिएन । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उपस्थिति कम भयो । जबर्जस्ती प्रयोग गराउने त होइन । रासस भनेको ‘राष्ट्रको हुलाक टिकट’ जस्तै हो । यो अन्य देशमा पनि हुन्छ । यहाँ पनि एउटा मात्र समाचार एजेन्सी हुँदा यसलाई राम्ररी हुर्कन सक्ने वातावरण नेपाल सरकारले पर्याप्त ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले गर्न सक्नुपर्ने हो ।
काठमाडौँमा पानी आएन, आएन, मेलम्ची–मेलम्ची भनेर मात्र हुन्छ ? पानी तुलसीपुर, हेटौँडा र वीरगञ्जमा पनि पर्याप्त छ कि छैन, यो पनि सञ्चारमाध्यमले बताइदिनुपर्‍यो । त्यहाँको समाचार कहिल्यै नआउने त ? के काठमाडाँैलाई मात्र नेपाल मान्ने हो ? उत्कृष्ट नगरपालिका कुन हो, राजस्व आम्दानीको हिसाबले कुन हो, दिए हुन्छ । सबै सञ्चारमाध्यमका लागि राष्ट्रिय समाचार समितिले नै यस्ता समाचारमा ध्यान पुर्‍याउन सक्छ ।
काठमाडौँ उपत्यका बहिर पनि कलाकार होलान्, त्यहाँ पनि रङ्गमञ्चमा नाटक प्रस्तुत भइरहेको होला । भएको छैन भने, छैन भनेर समयसमयमा समाचार आउनुपर्‍यो । राजधानीमा विभिन्न नाट्यशाला छन् । बाहिर छन् कि छैनन् ? छैन भने तपाईँहरूकहाँ किन बनेन भनेर सोधे हुन्छ, साहित्यकारलाई सोधे हुन्छ । खेलकूद क्षेत्रमा काठमाडौँ बाहिर प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हुँदैन ? अधिकांश नेपालीले चित्र र टेलिभिजनमा मात्र टेनिसकोर्ट देखेका छन् । यो दाबीका साथ भन्न सकिन्छ । काठमाडौँमा बस्नेहरूले पनि राम्रोसँग टेनिसकोर्ट देखेकै छैनन् तर रेडिमेड समाचार सधैँ आउँछ । चार पाँच कोलमका फोटो छापिन्छन् । अमेरिकी दिदीबहिनीमध्ये एकल वा दुवैले जिेतका छन् भनेर समाचार आउने गरेको छ । समाचारको सान्दर्भिकता हेर्नुपर्‍यो । सर्वोत्कृष्टहरुको दिने हो । समाचारका स्थानहरु खेर गएका छन् । त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले नेपालभित्र हुने खेलकूदका गतिविधि हेर्नुपर्छ । वैकुण्ठ मानन्धरले म्याराथनमा राखेको रेकर्ड तीसौँ वर्षदेखि कायमै छ । हाम्रो जिल्लाजिल्लाका खेलाडीका गतिविधिबारे समाचार दिनुप¥यो ।
राससले छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा एकएक जना संवाददाता राख्नुपर्छ । हाम्रो गतिविधि र सम्पर्क भारतसँग बढी छ । यो तथ्य हो । त्यसैले पनि त्यहाँ आवश्यकता हो । नेपाललाई ती देशमा प्रशस्त समाचार छन् । जति पैसा लागे पनि ती स्थानमा समाचारदाता राखौँ । अन्य महत्वपूर्ण राजधानी र शहरहरूमा नेपालले कम्तीमा स्ट्रिन्गर राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक दिने गरी राख्नुपर्छ । उदारणका लागि बङ्गलादेश र पाकिस्तान, त्यहाँ खटाएर काम दिनुपर्छ । नेपालको परिप्रेक्षलाइ हेरेर यो विषय भनिएको हो । मलाई विश्वास छ, यो काम गर्न सकिन्छ ।
यहाँमात्र होइन बाहिरी मुलुकका विज्ञ, खुफिया निकायका मानिसले आधिकारिक चाहिँ सरकारी सञ्चारमाध्यमाई मान्छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यमले ठाडै प्रोपगान्डा ग¥यो भने उसले बुझ्छ । हामीकहाँ आएको तथ्याङ्क शतप्रतिशत सत्य हुन्छ र यदि आएन भने हामी तुरुन्त सही तथ्य दिन्छौँ भनेर नारा नै बनाउनुपर्छ र कामले प्रमाणित गर्र्नुपर्छ । राससको भविष्य राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा सरकारमा धेरै भर पर्छ । लोकतान्त्रिक सरकार अझ परिमार्जित हुँदै आयो भनिएको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकार त झनै चनाखो हुनुपर्‍यो नि । त्यसबाट सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । यो विश्वास छ र यस्तो गर्न पनि सकिन्छ । ( लेखक राससका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो लेख रासस हीरक वर्षका पूर्वसन्ध्यामा कुराकानीमा आधारित भई प्रकाशन गरिएको हो )